News List - NRN विशेष
एनआरएनएले गोरखाको लाप्राकलाई ‘नमुना वस्ती’ बनाउने
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गोरखाको दुर्गम भूकम्पग्रस्त गाउँ लाप्राकलाई नमुना वस्ती बनाउने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहजीकरण समितिको हालै बसेको वैठकले नमुना वस्ती बनाउने गैरआवासीय नेपाली संघको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ...
विश्व समुदायबाट हामीले सिक्नुपर्छ : अध्यक्ष घले
बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. शेष घलेले तेज गतिमा बिकासले फड्को मारेको बिश्वको समुदायबाट नेपालीहरुले सिक्नु पर्ने बताएका छन्। संसारभर बिभिन्न मुलूकहरुमा पुगेका नेपालीहरुले त्यहाँको समाजबाट पनि धेरै कुराहरु सिकेर,ब्यबारिक जीवनमा ...
छुरा प्रहारबाट घाइते राजदूत शर्मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज
रियाद । छुरा प्रहारबाट घाइते भई अस्पताल भर्ना भएका साउदी अरबका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मालाई डिस्चार्ज गरिएको छ। छुरा प्रहारबाट मुख, काँध र औँलामा गम्भीर चोट लागेका शर्मालाई उपचारपछि बिहीबार साँझ डिस्चार्ज गरिएको दूतावासका ...
बेल्जियममा नेपाल महोत्सवको भव्य तयारी
बेल्जियम । गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको आयोजनामा आगामी आइतबारका दिन लुभेन शहरमा एकदिने नेपाल महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ । महोत्सव वेल्जियममा स्थापित वैचारिक, जातिय, सामाजिक तथा ...
दुबईमा एनआरएनको अन्तरक्रिया, नेपालीले गरे सामाजिक सहकार्यको प्रतिवद्धता
यूएई । गैरआवासीय संघ, यूएईले ‘यूएईमा आजको आवश्यकता सामाजिक कार्यमा सबैको सहभागिता’ शीर्षकमा शुक्रबार दुबईमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । पछिल्ला समय एनआरएनले गरेका जनमुखी कार्यक्रमहरुमा अन्य नेपाली संघसंस्थाहरु उदासीन देखिएको भन्दै ...
१७ महिने नेपाली वालकः अष्ट्रेलियाको फुटपाथमा ज्यान गुमाए (तस्विर सहित)
सिड्नी । एक नेपाली नावालकले अष्ट्रेलियाको सडकमा ज्याान गुमाएका छन् । एक कारले अकस्मात ठक्कर दिएपछि हजुरआमासँग फुटपाथमा हिँडिरहेका नावालक नेपाली मारिएका हुन् अष्ट्रेलियाको सिड्नी नजिकै पर्ने न्युथ साउथ वेल्स राज्यको अउबर्न भन्ने ठाउँमा १७ महिने नेपाली वालक ...
अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले दिए नेपालीलाई शुभकामना
अष्टेलिया । अस्ट्रेलियाको बिभिन्न शहरहरुमा नेपालीहरुको प्रभुत्व बढ्दै गएपछि अस्ट्रेलियन राजनीतिक दल र सरकारले पनि त्यसमा सम्वोधन गर्न थालेका छन् । सोही क्रममा नेपाली नयाँ बर्षको उपलक्ष्यमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले नेपाली ...
लागूऔषध कारोबार गरेको भन्दै अष्ट्रेलियामा एक नेपाली पक्राउ
अष्ट्रेलिया । नेपाली नागरिक भुपेन्द्र तामाङ ५४ के.जी. मेथाफेटामाईनसहित अष्ट्रेलियामा पक्राउ परेका छन्। चीनको गोन्जाउबाट समुद्री मार्ग हुँदै २०१६ को जनवरीमा अष्ट्रेलियाको ब्रिसवेनमा घर सजावटका सामान भनी पठाएको सामान लिन पुगेका अष्ट्रेलियन नागरिक रेमोण्ड ...
मलेसियाको आगलागीमा ४ सय ८ जना नेपालीको राहदानी जल्यो
काठमाडौं । दुई साता अघि मलेसियाको एक कम्पनिमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा ४ सय ८ जना नेपालीको राहदानी जलेर नष्ट भएको खुल्न आएको छ । जोहोरमा अवस्थित Eco-shop marketing sdn. bhd. नामक कम्पनिमा भएको आगलागीमा धेरै संख्यामा राहदानी जल्न पुगेको कम्पनिका नेपाली सुपरभाईजर शैलेन्द्र ...
इकोटिरियल गुयानामा एनआरएनए को ७३ औ शाखा गठन
गुयाना । मध्य अफ्रिकी मुलुक इकोटिरियल गुयानामा एनआरएनए को ७३ औ शाखा गठन भएको छ । एनआरएनएका अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल कार्कीका अनुसार भर्खरै गठन गरिएको गैर आवासीय नेपाली संघ इकोटिरियल गुयाना राष्ट्रिय समन्वय समितिमा सन्तबहादुर बिष्ट अध्यक्ष रहेका ...
ब्रसेल्समा समस्या भए फोन गर्न नेपाली दूतावासको आग्रह
ब्रसेल्स । बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा मंगलबार भएको श्रृङ्खलावद्ध विस्फोटपछि कुनै सहयोग चाहिए त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दूतावासमा सम्पर्क गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। समस्यामा परेकाले ब्रसेल्समा रहेको नेपाली राजदूतावासको ...
बेल्जियम घटनामा नेपाली परेको जानकारी छैनः एनआरएन
९ चैत, काठमाडौं । बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित बिमानस्थल र भूमिगत रेलमार्गमा मंगलबार बिहान भएको बिष्फोटबाट नेपाली समुदाय सुरक्षित रहेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष शेष घलेले बेल्जियमस्थित गैरआवासीय नेपालीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा ...
कुवेतबाट ८१३ नेपाली फर्काइए, ३४ जना जेलमा
काठमाडौं । कुवेतले अवैधानिक कामदारविरुद्ध धरपकड तीव्र पारेको छ । सन् २०१६ यता कुवेतले ६ हजार विदेशी कामदारलाई देशनिकाला गरेको छ, जसमा ८१३ जना नेपालीहरु पनि परेका छन् । अवैधरुपमा कुवेत पुगेका, भागेर रोजगारदाता परिवर्तन गरेका र भिसा अवधि सकिएर पनि उतै ...
साउदीमा २५ नेपाली पक्राउ, धनुषाका मात्रै १२ जना
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरबमा रहेका २५ जना नेपालीलाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषाका मात्रै १२ जना रहेको जनाइएको छ । साउदीको रूवाफिद अल ट्रोक कम्पनीले कामको लागि अनुमतिपत्र नदिएको र प्रक्रियासमेत पूरा ...
साउदी अरबमा घरेलु कामदारका रुपमा बन्दी जीवन बिताइरहेका सातजना नेपालीको उद्धार
साउदी अरब । अवैधानिक रुपमा कुबेत हुँदै साउदी अरब आई घरेलु कामदारका रुपमा बन्दी जीवन व्यतित गरेका सातजना नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ । लामो समयदेखि साउदीमा अलपत्र परेका ती नेपाली महिलाको रियादस्थित नेपाली दूतावासको पहलमा उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको हो ...
एनआरएनएले ल्यायो बैदेशिक रोजगारको कार्य योजना
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तरगतको बैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासी कामदार कल्याण समिति (२०१५-१७)ले आफ्नो कार्यदल तथा कार्य योजना तयार पारेको छ । एनआरएनए आइसीसीका पूर्व सल्लाहकार धरम के.सी.(साउदी अरब)को संयोजकत्वमा गठित १५ ...
विधार्थीकोहितका लागि एनआरएन अस्ट्रेलिया
सिड्नी । एनआरएन अस्ट्रेलियाको आयोजनामा रास्ट्रव्यापी “WALK FOR WELFARE ” कार्यक्रम गर्ने भएको छ । प्रवासमा बढ्दै गरेको नेपाली प्रवासी विधार्थी हरुलार्इ लक्षित गरि उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लगिएको हो । अस्ट्रेलियाको सिड्नी, मेल्वर्न, व्रिस्बेन र पर्थमा ...
पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैं तयार
काठमाडौं । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा चन्दा उठाएरै भएपनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट भोलन्टियर सर्भिस अवार्डको स्वर्ण पदक बिजेता पहिलो नेपाली तथा पश्चिम अमेरिका नेपाली ...
मलेसियामा २५८ नेपाली कामदार पक्राउ
काठमाडौं । मलेसियामा अवैध रुपमा कार्यरत २ सय ५८ जना नेपाली कामदार पक्राउ परेका छन् । मलेसियन सरकारले सुुरु गरेको अवैधानिक पूर्नदर्ता कार्यक्रममा सहभागी नभएका नेपाली कामदार पक्राउ परेका हुन् । गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ६ सय ५४ वटा अप्रेसन चलाएर ...
टोरोन्टोमा नेपाली चलचित्र महोत्सवको तयारी
टोरोन्टो । क्यानडाको टोरेन्टोमा आगामी साता नेपाली चलचित्र महोत्सव हुने भएको छ । नेपाली साना चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विगतका बर्षहरुमा झै यस बर्ष पनि क्यानडाको टोरोन्टोमा ‘टोरोन्टो नेपाली फिल्म फेस्टिवल’ हुने भएको हो । मार्च १९ र २० ...
Results 144 - You are at page 1